मिया खालिफाले गरिन् पतिसँग अलग भएको घोषणा - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
मिया खालिफाले गरिन् पतिसँग अलग भएको घोषणा
अभिनेत्री मिया खालिफाले श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेद गरेकी छन् । हालै उनले आफुले सम्बन्धविच्छेद गरेको घोषण गरेकी हुन् ।
खलिफाले श्रीमानसँग अलग भएको जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फतै दिएकी छिन् । पूर्व एडल्ट स्टार खलिफाले दुई वर्ष पहिले रोबर्ट सेन्डबर्गसँग विवाह गरेकी थिइन् । उनले आफ्नो विवाहको जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएकी थिइन् ।
दुई वर्षमा उनीहरूको सम्बन्धमा उतारचढाव आइरहे । अहिले भने दुवैले अलग हुने निर्णय गरेको उनको भनाई छ । मियाले लेखेकी छिन्, ‘पूरै यकिनसाथ यो भन्न सक्छु कि हामीले वैवाहिक सम्बन्धलाई बचाउन निकै कोसिस ग¥यौँ । करिब एक वर्षको थेरापी र कोसिसपछि थाहा भयो कि हाम्रो एक–अर्काप्रतिको भावना सकिएको छ ।’
उनले अगाडि लेखेकी छिन्, ‘हामी सधैँ एक–अर्कालाई प्रेम र सम्मान दिइरहनेछौँ । किनभने हाम्रा ब्रेकअप कुनै घटनाको कारणले भएको होइन, तर विवाद भने निकै भएको थियो । साथै हामीले एक–अर्कालाई आरोप पनि लगाउने छैनौँ ।’
खालिफाले सन् २०१४ मा पोर्न उद्योगमा पाइला राखेकी थिइन् । यसपछि उनी परिवारबाटै टाढा भएकी थिइन् । सन् २०१६ मा उनले पोर्न उद्योग छाडेकी थिइन् । उनले सन् २०१९ मा रोबर्टसँग विवाह गरेकी थिइन् ।
खुशीको खबर : मलेसियाले ३२ हजार कामदार लैजाने तयारी ?
मलेसिया : मलेसियाले प्लान्टेशन क्षेत्रमा ३२ हजार विदेशी कामदार ल्याउने भएको छ । विदेशी...
मलेसियामा दुर्घटनामा परि फेरि अस्ताए एक नेपाली युवा
मलेसियामा कामदार अभाव ३२ हजार नेपाली कामदार माग ?
मलेसिया सरकारले ३२ हजार बिदेशी कामदार ल्याउने तयारी थाल्यो ?
एजेन्सी , २५ भदौं । इन्डोनेसियाको राजधानी जाकार्तानजिकै रहेको एउटा जेलमा भएको आगलागीमा परी...
मेक्सिकोमा शक्तिशाली भूकम्प, सूनामीको चेतावनी
सिद्धार्थको मृत्युको बारेमा नयाँ खुलासा, मृत्युको कारण अर्कै
उद्धारका लागि काबुल गएको युक्रेनी विमान अपहरणमा पर्यो
मलेसियाको नव प्रधानमन्त्री दातोक श्रि इस्माईल साब्री बिन याकोबले राजासमक्ष लिए शपथ ग्रहण